မဖြစ်မီက ထုတ်နှင့်ပါ - အူမကြီးကင်ဆာ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
မဖြစ်မီက ထုတ်နှင့်ပါ – အူမကြီးကင်ဆာ
ဧပြီ 17, 2019 Assoc. Prof. Teerha Piratvisuth, M.D.
ဆီးချိုရှိသူတွေ၊ အသည်းအဆီဖုံးဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေဟာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်စေဖို့ အခွင့်အလမ်း ပို များပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာမျိုးရိုးရှိသူတစ်ဦးရဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ချေ (သူ့အဖိုးအဖွားတွေမှာ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ) သူ့မှာ ဖြစ်နိုင်ချေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအဖြစ်အများဆုံး ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ဆက်လက်တိုးတက်နေပါတယ်။ ထိုင်းမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အူမကြီးကင်ဆာလူနာအရေအတွက် ဟာ မှန်မှန်ကြီး တိုးတက်နေပါတယ်။ ဖြစ်ခါစမှာ ရောဂါလက္ခဏာ အနည်းငယ်သာ ပြတတ်ပြီး ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ခုထိ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရသေးတဲ့အတွက် အူမကြီးကင်ဆာ ဆိုတာ သက်ရွယ်ကျားမမရွေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ “အသံတိတ်အန္တရာယ်ကောင်ကြီး” လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ – “တိမ်တိုက်တိုင်းမှာ ငွေရောင်အနားကွပ်ရှိတယ်”လို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ အူမကြီးကင်ဆာအတွက် မျှော်လင့်ချက်ငွေရောင်အနားကွပ်ကလေးကတော့ စာရင်းဇယားများ အရ ၉၀% သော အူမကြီးကင်ဆာတွေဟာ အူထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ adenomatous အသားပိုအလုံး တွေကနေ စ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတာပါပဲ။ အဲဒီတော့ စောစော သိရရင် ကင်ဆာအဆင့် မရောက်ခင် စောစော ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်တာပေါ့။
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မှန်ပြောင်းကြည့်ရင်း အသားပိုတွေကိုတွေ့ရင် တစ်ခါတည်း ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်လို့ပါပဲ။ အဲဒီအသားပိုကို ဓာတ်ခွဲခန်းပို့ စစ်ပြီးတော့ တကယ်လို့ ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်လို့သာအဖြေထွက်ခဲ့ရင် ရောဂါကုသရေးအတွက် ချက်ချင်းလက်ငင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တာပေါ့။
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ဖို့ အသက် ၅၀ ပြည့်အောင် စောင့်ရမှာလား။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံမှန်လူတစ်ဦးဟာ အခြားရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမနေဘူးဆိုရင် အသက် ၅၀ လောက်မှာ အကြိုကင်ဆာအဆင့် အသားပိုများရှိမရှိ ဆိုတာ သိရဖို့ အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့် စစ်ဆေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း အူမကြီးကင်ဆာမျိုးရိုးရှိသူတွေ အဖို့တော့ အဆိုပါကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေဟာ တခြားမျိုးရိုးမရှိသူတွေထက် အန္တရာယ်ပိုများနေပြီး သူတို့အတွက် သေမင်းတမန်ရောဂါ လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မျိုးရိုးဗီဇလက်ဆင့်ကမ်းရေး ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများမှာ အကျုံးဝင်နေပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်ချေကို ပိုများလာစေပါတယ်။ ဒါကို familial adenomatous polyposis syndrome လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် type2diabetes လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးချိုအမျိုးအစား-၂ ရောဂါရှင်များ နဲ့ အင်ဆူလင် ယဉ်ပါးသူများ (ပုံမှန်ထက် အင်ဆူလင်အဆင့် မြင့်တက်နေသူများ) ကိုလည်း အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်မြင့်မားသူများ လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်ဆူလင် ဟာ တစ်သျှူးနဲ့ ဆဲလ် ကြီးထွားခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အူအတွင်းက အသားပို ဟာ ကင်ဆာအဆင့်ကို မြန်မြန်ကြီး ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုအမျိုးအစား-၂ ရောဂါရှင်များ အနေကတော့ ပထမဦးစွာ ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေပြီး အဆိုပါရောဂါမရှိတဲ့သူတွေထက် ရောဂါပြန့် သွားတဲ့နှုန်းဟာ အလွန် မြန်ဆန်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်မြင့်မားသူများ စာရင်းထဲမှာ ထည့်ထားရပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်ရှိတဲ့အုပ်စုတစ်စုကတော့ အရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဝေဒနာရှင်များအုပ်စု (NAFLD) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုဝင်လူများက တော့ ပုံမှန်လူတွေထက် လူ့သက်တမ်းမှာ ၁.၆ ကနေ ၁.၈ ဆ အထိ တိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ နာတာရှည်အသည်းရောဂါ၊ အသည်းခြောက်ခြင်း နဲ့ အသည်းကင်ဆာ တွေအပြင် အူမကြီးကင်ဆာ လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အံ့ဩဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားသုတေသနပြုမှုတစ်ခုမှာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ရှိသူနဲ့ မရှိသူ လို့ နှစ်အုပ်စုခွဲထား ပြီး အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်ပေးကာ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ လူ ၁၂၀၀ ပါတဲ့ နမူနာအုပ်စု မှာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါရှိနေတဲ့ အုပ်စုထဲက အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျန်အုပ်စုထက် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော အဒီနိုမာ အသားပိုတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ရှိသူတွေဟာ အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်စေဖို့လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်နေတာမို့လို့ သူတို့ကို အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ် မြင့်မားသူများအဖြစ် အသေအချာ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ကောင်း၏။
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် oncogenetic screening လို့ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာမျိုးရိုးဗီဇကို စစ်ဆေးတဲ့ နည်းပညာ အသစ် တစ်မျိုးနဲ့လည်း စမ်းသပ်ရှာဖွေနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာဟာ လူတစ်ဦးရဲ့ အနီးဆုံးမိသားစုဝင်များ နှင့် သွေးသားရင်းချာများ၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ စစ်ဆေးမှုကနေ မိသားစုထဲမှာ ဒီရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင် အခြားမိသားစုဝင်များမှာပါ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိကျတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများကို အားကိုးအားထားပြုလို့ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ တစ်ခေတ်ဆန်းပြီလို့ ကြေညာနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ခုဆိုရင် ရောဂါဝေဒနာကို ဖြစ်ခါမှ ကုသပေးတာသက်သက် တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်တော့ဘဲ အလားတူ ရောဂါများ နောက်ထပ် ပြန်ဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ရေးကိုပါ ရည်ရွယ်အာရုံစိုက် လာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတော်တော်များများဟာ မျိုးရိုးဗီဇ ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။ ဥပမာ – ကင်ဆာရောဂါဟာ မျိုးဆက် တစ်ခုကနေတစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်တတ်တယ် ဆိုတာကို တကယ်ပဲ နားမလည်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အမျိုးထဲမှာ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ ဆိုပြီး အံ့ဩနေကြပါတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် ရောဂါဝေဒနာဟာ ကိုယ့်ဆီကိုအရောက် လာ၊ ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ကိုယ့်အနားကနေ တဖြုတ်ဖြုတ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ရောဂါက ကိုယ့်တစ်မျိုးလုံးကို မင်းမူအနိုင်ယူသွားတဲ့နေ့ကို ဒီလိုပဲ ထိုင်ကြည့်နေကြတော့မလို့လား။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကပဲ သိသိသာသာကြီးကို တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆိုရင် တစ်သျှူးနမူနာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာ အခြားပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ ကင်ဆာရောဂါကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စစ်ဆေးရှာဖွေနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာ အမျိုးပေါင်း ၃၀ လောက်ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ ဘုံ (အထွေထွေ) မျိုးရိုးဗီဇ အမျိုး ၅၀ လောက်ကို စစ်ဆေးရှာဖွေနိုင်နေပြီ ဖြစ်တာမို့လို့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်အားလုံးလောက် နီးနီးကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေဆီကို လာခဲ့ပါ။ သူတို့ဆီကနေ ဘ၀နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်ကောင်းတွေကို ရယူလှည့်ပါ။ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုအစီအစဉ် တွေကို ခံယူလှည့်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ရင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
မဖြစ်မီက ထုတ်နှင့်ပါ - အူမကြီးကင်ဆာ အူမကြီးကင်ဆာဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအဖြစ်အများဆုံး ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ဆက်လက်တိုးတက်နေပါတယ်။ ထိုင်းမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အူမကြီးကင်ဆာလူနာအရေအတွက် ဟာ မှန်မှန်ကြီး တိုးတက်နေပါတယ်။ ဖြစ်ခါစမှာ ရောဂါလက္ခဏာ အနည်းငယ်သာ ပြတတ်ပြီး ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ခုထိ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရသေးတဲ့အတွက် အူမကြီးကင်ဆာ ဆိုတာ သက်ရွယ်ကျားမမရွေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ “အသံတိတ်အန္တရာယ်ကောင်ကြီး” လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
User rating: 3.42 out of5with 19 ratings